Olona 30 Tao Gresy Nahazo Asa Vaovao Tamin’ny Alalan’ny Diezy Twitter · Global Voices teny Malagasy
Olona 30 Tao Gresy Nahazo Asa Vaovao Tamin'ny Alalan'ny Diezy Twitter
Voadika ny 14 Janoary 2014 22:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Français, Español, русский, Català, македонски, 日本語, Ελληνικά, English
Soratsoratra amin'ny teny grika mivaky hoe: “Tsy manantena na inona na inona aho, tsy matahotra na inona na inona aho, tsy an'asa aho”, famerenana indray ilay fomba fiteny malaza an'ilay mpanoratra Grika iray. Sary avy amin'i SpirosK photography via Flickr. CC BY-NC-ND 2.0
Tamin'ny fotoana izay nahatratra 27 isan-jato ny tahan'ny tsy fananan'asa tao Gresy, nanampy olona 30 tamin'ny fahitana asa ny diezy (hashtag na tenifototra) Twitter tao amin'ny firenena.
Noforonin'ilay mpisera Twitter @dimitrischrid tamin'ny fiandohan'ny volana Oktobra ny diezy #aggeliesergasias (jobadverts (filazanaasa) ) mba hanampiana ireo mpisera media sosialy hizara vaovao mikasika izay asa azo atao ao Gresy sy any ivelany. Tamin'ny 11 Desambra, lohahevitra malaza nandritra ny 11 ora tao amin'ny Twitter Grika ny diezy, noho ny fampiasan'ireo mpisera Twitter azy sy noho ireo fitaka sy lainga amin'ny vavahadin-tserasera sasany momba ny asa.
Fantatrao ve fa lohahevitra malaza tamin'ny Alarobia 11 nandritra ny 11 ora tao Gresy ny #aggeliesergasias
Nanjary mariky ny firaisankina tao amin'ny Aterineto ho fanoherana ny olan'ny tsy fananan'asa tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny firenena izany. Fampahalalam-baovao maromaro tao Gresy no niresaka momba ity fisantaran'andraikitra ity, nanasokajy izany ho tsotra, maranitra ary mahomby. Bilaogy Keep Talking Greece, natokana hizarana ny tantaran'ireo “tena” Grika niharan'ny krizy, nanoratra hoe:
Tao anatin'ny andro vitsivitsy, nipoaka ny helo: nanomboka nandefa tolotr'asa izay fantany na reny ireo mpisera Twitter, raha toa kosa ka nandefa izay asa tadiaviny ireo mpitady asa. Ny fizarana sioka sy ny fampakarana izany ho favori nonahahaingana ny fahombiazan'ity fomba maoderina, amin'ny alalan'ny fitaovam-piseraseram-piarahamoina ity hitadiavana tolotr'asa mivoaka any Athènes na Xanthi, any London na Preveza, any Cete na any Geneva.
Ny Mpanangana @dimitrischrid nanazava tamin'ny tranonkalam-baovao Protagon ny fiantraikan'ilay diezy (hashtag) hatramin'izao:
Hatramin'izao fotoana izao, ary mbola lasa aloha loatra sady mbola maro no tsy mahafantatra ity fomba fitadiavana asa ity, manodidina ny 30 no efa nandefa hafatra nilaza tamiko fa nisy nandray ho mpiasa izy ireo ary te-hisaotra ahy noho izany fahazoana asa izany. […] Afa-manao diezy avokoa ny tsirairay amintsika, tsy misy fomba handraisam-bola hahatrarana ny fahombiazana, saingy ny valisoa mendrika (mifanaraka amin'ny mety) azoko isan'andro dia mbola manan-danja noho ny vola misy manerana izao tontolo izao
Niitatra tao amin'ny Facebook ihany koa ity ezaka ity.